Fahatakarana ny hetahetan'ny fangatahana vs ny taranaka mitarika | Martech Zone
Fahatakarana ny hetahetan'ny fangatahana vs ny taranaka mitarika
Asabotsy, Aogositra 22, 2015 Asabotsy, Aogositra 22, 2015 Douglas Karr
Matetika ny mpivarotra dia manova ny teny hoe demand demand (demand gen) ho an'ny lead lead (lead gen), saingy tsy mitovy ny paikadiny. Ireo orinasa manana ekipa mpivarotra natokana dia afaka manaparitaka ireo paikady roa miaraka. Matetika ny orinasa dia manana ekipa fivarotana miditra hamaly fangatahana niteraka ny fangatahana varotra ary ekipa mpivarotra ivelany hiditra amin'ireo fitarihana ireo mitarika hetsika atao amin'ny taranaka.
Raha azo ampiharina an-tserasera ny fiovam-po ka tsy misy ifandraisany amin'ny orinasa, ny fitakiana fitakiana dia zava-dehibe amin'ny fampandehanana ny fahatsiarovan-tena, ny fitokisana ary ny fahefana amin'ny vokatrao sy ny serivisinao. Raha toa ka mitaky fifanakalozana varotra, fifampiraharahana na tsingerina fivarotana lava kokoa ny fiovam-ponao, dia mitarika ny famokarana lohandohany mba hahazoana sy hahazoana fitarihana mpivarotra mahay voakarakara hatramin'ny farany.
Inona no atao hoe Generation Demand
Ny fitakiana fitakiana dia mitarika fahatsiarovan-tena sy fahalianana amin'ny vokatra sy serivisy an'ny orinasa. Ny tanjona dia ny mitondra fiara mihidy orinasa miaraka amin'ny fifanakalozana kely indrindra amin'ny mpanjifa na orinasa mahasarika anao.
Raha misy ny fitakiana fangatahana dia mety ho mahery setra kokoa ianao amin'ny familiana ny vinavina amin'ny alàlan'ny tsingerin'ny fivarotana sy ny fampidirana azy ireo mivantana amin'ny fiovam-po.
Inona no atao hoe Generation Lead
Ny taranaka mitarika dia mitarika ny fahalianana na ny fanadihadiana momba ny vokatra na serivisy. Ny tanjona dia ny fanangonana fifandraisana mahay manangana fifandraisana sy mikolokolo mandra-pikatona ho mpanjifa.
Rehefa mampiasa paikady fitarihana loholona ianao dia mety ho mahery setra kokoa amin'ny fanangonana fampahalalana mifandraika mba hahafahanao manangana fifampitokisana sy mifandray amin'ny fanantenana amin'ny fotoana. Mazava ho azy, tsy te-hanelingelina na hampihemotra ny fahalianan'ny mpitarika ianao amin'ny fanidiana orinasa miaraka aminao ihany koa. Lead scoring dia manakiana - ny fahafantarana raha mety ny mitarika, manana teti-bola azo, manakaiky ny fanapahan-kevitry ny fividianana. Ny tsingerin'ny varotra lava kokoa, ny firosoana amin'ny dingana maro, ary ny varotra orinasa dia mitaky paikady sy dingana fitarihana.
Ny fizotrany dia mety hitovy, ary ny tetika dia mety hitovizany amin'ireo tetikady roa ireo. Ohatra, mbola mety hanenjika mafy ny tetika fikarohana, ara-tsosialy ary PR aho hananganana fahatsiarovan-tena sy hitarika ny fangatahana na ny fitarihana. Azoko atao ny mamorona infographic na whitepaper izay manampy amin'ny famelomana ny mpitarika na hampirisika ny fanapahan-kevitry ny fividianana. Raha manandrana mitarika fitarihana aho, na izany aza, azoko atao ny manasongadina bebe kokoa ny fahaiza-manaon'ny orinasa ary ny fomba fametrahana fifandraisana eo amin'ny roa maharitra dia tena stratejika.
Ny fahombiazana na ny fandrefesana dia mety tsy hitovizany amin'ireo paikady roa. Fa fitakiana fitakiana, Mety mifantoka bebe kokoa amin'ny fanatrarana ny marketing sy ny fiovam-po vokatr'izany aho. Fa taratrafm, Mety mifantoka bebe kokoa amin'ny habetsahan'ny fitarihana varotra mahay aho. Na dia mety ho tompon'andraikitra amin'ny paikady na ekipa aza ny ekipa marketing, ny ekipa mpivarotra no tompon'andraikitra amin'ny fanakatonana orinasa miaraka amin'ny paikadin'ny taranaka mitarika. Ny ekipa marketing dia tompon'andraikitra fotsiny amin'ny habetsaky ny kalitaon'ny tondro natolotra.
Tags: fitakiana fitakianafitakiana fitakiana mifanohitra amin'ny fitarihanafitakiana mifanohitra firakavarotra miditrataratrafmmitarika taranaka mifanohitra amin'ny fitakianamitarika mifanohitra amin'ny tinadyvarotra ivelany
Inona ny tetibola ara-barotra mahitsy amin'ny isan-jaton'ny vola miditra?
Jun 23, 2017 ao amin'ny 8: 26 PM
lahatsoratra tena tsara. Misaotra anao nanazava ny maha samy hafa ny roa!